Ahoana ny fametrahana Docker amin'ny Raspberry pi miaraka amin'ny Raspbian? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana Docker amin'ny Raspberry pi miaraka amin'ny Raspbian?
Docker dia rafitry ny kaontenera fa tsy mila loharano be dia be ianao hampandehanana kaontenera, ka Mazava be ary noho izany Docker dia mety ho kandida tonga lafatra amin'ny fampandrosoana sy fanandramana tranonkala amin'ny Raspberry Pi.
Mazava ho azy, afaka manao zavatra hafa toa ny mitantana mpizara tranonkala, mpizara proxy na mpizara tahiry ary maro hafa ao amin'ny Docker amin'ny Raspberry Pi.
Raha mbola tsy fantatrao ny momba an'i Docker dia tokony ho fantatrao fa tetikasa loharano misokatra io mandeha ho azy ny fametrahana fampiharana ao anaty kaontenera rindrambaiko, manome sosona fanampiny abstraction ary mandeha ho azy ny fampiharana virtualization manerana ny rafitra miasa maro.
Docker mampiasa ny fisintahana loharanom-pahalalana amin'ny kernel Linux, toy ny cgroups sy ny namespaces (namespaces) ahafahan'ny "kaontenera" misosa mihazakazaka ao anaty ohatra Linux tokana, hisorohana ny lohan'ny fanombohana sy fitazonana ireo milina virtoaly.
1 Fanomanana ny Raspberry Pi
2 Ampidiro Docker amin'ny Raspberry Pi
Fanomanana ny Raspberry Pi
Ny fametrahana Docker amin'ny Raspberry Pi-tsika dia tsy inona na inona hanoratana an-trano ary tsotra ny fametrahana azy. Ao amin'ity lesona ity Horaisinay ho toy ny fototra ny rafitra ofisialin'ny Raspberry anay izay Raspbian.
Raha mbola tsy apetrakao amin'ny Raspberry anao ity rafitra ity dia azonao atao ny mijery ity lahatsoratra manaraka ity izay manazava ny fomba hanaovana azy amin'ny fomba somary tsotra. Ny rohy dia ity.
Efa miaraka amin'ny Raspbian napetraka amin'ny Raspberry pi, hanavao ireo fonosana izahay ary ny cache repository APP Raspbian APT miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Ankehitriny, tsy maintsy manavao ireo fonosana rindrambaiko vaovao rehetra ianao izay voamarika avy amin'ny Raspbian. Noho izany dia tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity isika:
Amin'izay fotoana izay dia mila havaozina ireo fonosana rindrambaiko.
ankehitriny, mila mametraka ny lohan-kernel ho an'ny rafitra fiasa ianao. Zava-dehibe izany, satria raha tsy mametraka ny lohan-kernel ianao dia tsy mandeha i Docker.
Mba hametrahana ireo lohan-kernel, ny sisa ataonao dia ny mihazakazaka ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Vonona daholo ireo voalaza etsy ambony, afaka mandroso amin'ny fametrahana Docker amin'ny Raspberry Pi malalantsika isika, satria azonay antoka tanteraka fa manana ny fonosana havaozina rehetra an'ny rafitra izahay.
Ampidiro Docker amin'ny Raspberry Pi
Fametrahana docker Ataontsika amin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Mety maharitra fotoana fohy ity fizarana fampidinana sy fametrahana ity, noho izany dia manolo-kevitra anao aho mba handanianao ny fotoanao.
Miaraka amin'ny fametrahana Docker ao amin'ny rafitry ny Raspberry Pi, manomboka amin'ny asa fampiharana izahay izao Docker hahafahanao mampiasa azy.
Ho an'ity ny dingana voalohany dia ampio ny mpampiasa anay "pi" (Default amin'ny fiteny tsy fantatra) ho an'ny vondrona docker. Araka izany, ho afaka mamorona sy mitantana kaontenera, sary, boky sns ianao. docker tsy misy tombony sudo na superuser.
Raha namorona mpampiasa hafa izy ireo dia tsy maintsy soloin'izy ireo ny "pi" amin'ny solon'anarany ao amin'ilay baiko. Hanampiana ny mpampiasa pi ao amin'ny vondrona Docker mila mihazakazaka izao baiko manaraka izao fotsiny izy ireo:
Nanao izao fanovana izao, ilaina ny manao restart ny rafitray, ka ny fanovana natao dia entina amin'ny fanombohana ny rafitra ary ampidirina ny fanampiana ny vondrona Docker mpampiasa anay.
Azon'izy ireo atao ny mamerina ny rafitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Rehefa tafaverina indray ny rafitra dia miverina ao aminy isika ary hanokatra fantsona iray. Ao anatin'izany no hanatanterahantsika ity baiko manaraka ity hamarinina ny fametrahana Docker ary efa mandeha amin'ny rafitra izy io:
Araka ny hitanao, Docker dia miasa tanteraka amin'ny Raspberry Pi anao sahady.
Izao dia mila mampihatra ny kaontenera voalohany fotsiny ianao. Mba hanaovana izany dia afaka mitady iray amin'ny pejy Docker ianao, izay misy rindranasa maro. Ny rohy dia ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny fametrahana Docker amin'ny Raspberry pi miaraka amin'ny Raspbian?
Tonga ny kinova vaovao an'ny Kdenlive 19.04 ary ireto ny vaovaony
Sam Hartman no DPL vaovao an'i Debian